स्वतन्त्र प्रेसका लागि सदन र सडकमा आन्दोलन चर्काउँछौंः देउवा
As of Fri, 07 Aug, 2020 19:05
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याउन लागेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ प्रति गम्भिर आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर देउवाले सरकारले पत्रकारका लागि ‘कू’ गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, “पाँच वटा ‘फन्डामेन्टल राइट’ मध्ये लिबर्टी पहिलो राइट हो । स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन । स्वतन्त्रता हाम्रो सिद्धान्त हो, आदर्श हो । यसका लागि पार्लियामेन्टभित्र र बाहिर देशभरी नै आन्दोलन चर्काउँछौं ।”
सभापति देउवाले मिडिया प्रजातन्त्रका लागि नभई नहुने कुरा भएको बताए । उनले भने, “पञ्चायतमा यो अधिकार थिएन । यसैका लागि लडेका हौं, अब फेरि पनि लड्छौँ । तपाईंहरुले भन्नुभो भने अरु पनि समर्थन गरौंला । तपाईंहरुलाई आवश्यक परेको बेला हाम्रो समर्थन छ । विधेयक अध्ययन गरेर विथड्र पनि गराउन सकिन्छ ।”
‘जय नेपाल’ शब्दको अपव्याख्याबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा सभापति देउवाले नेपालको जय नभनेर के इण्डिया अथवा चीनको जय भन्ने ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले भने, “त्यस्ता पागल कुराको कुनै जवाफ हुँदैन । जय नेपाल, नेपालको जय नभनेर के इन्डियाको जय भन्ने ? के चीनको जय भन्ने ?”
“नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो– नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मको प्रतिकूल छ,” कांग्रेसले भनेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विधेयक संविधान प्रतिकूल रहेको बताए । संविधान प्रतिकूल रहेको विधेयक अगाडि बढ्न नदिने उनले चेतावनी दिए । त्यस्तै सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गर्न कुण्ठित गर्ने विधेयकमा सहमत हुन नसक्ने बताए ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेसलाई नियन्त्रण गरेर कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जान खोजेको सरकार ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, “स्वतन्त्र पत्रकारिताको हक अधिकार नेपाली प्रेस जगतले कसैको कृपाले पाएको नभई यसका लागि पत्रकारले लडेका छन् । संघर्ष गरेका छन् र रगत बगाएका छन् । कम्युनिस्टले कृपामा दिएका होइनन् ।”
पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवासँगै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक भिष्मराज आङ्दम्बे, सदस्य देबेन्द्रराज कँडेल, केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो ।
बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकारहरुले सोधेको ‘मेरो सरकार’ किन फेरिएन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका थिए, “पैला कसले भन्या’थ्यो भन्ने हो भने डिक्सनरीबाट त्यो डिलिट गर्दिन प¥यो । मेरो सरकार डिलिट गरिनुप¥यो, परेन र ? त्यो त राख्नै भएन नेपाली शब्दकोशमा । त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने ‘जय नेपाल’ पनि डिलिट गर्नुपर्छ । ‘जय नेपाल’ प्रहरीले भन्छ, प्रहरीको मात्रै हो त्यो ?”